CATINO Imba Yekugezera Muunganidzwa - Dhizaini magazini
Imba Yekugezera Muunganidzwa
Imba Yekugezera Muunganidzwa CATINO inozvarwa kubva kuishuvo yekuda kupa chimiro kune kufunga. Iyi kuunganidza inosimudzira nhetembo yehupenyu hwezuva nezuva kuburikidza nezvinhu zviri nyore, izvo zvinodudzira zviripo archetypes zvekufunga kwedu mune zvazvino nzira. Iyo inopa zano rekudzokera kunharaunda yekudziya nekusimba, kuburikidza nekushandiswa kwematanda echisikigo, akagadzirwa kubva kune yakasimba uye akaunganidzwa kuti agare asingaperi.
Zita rechirongwa : CATINO, Vagadziri zita : Emanuele Pangrazi, Izita remutengi : Disegno Ceramica.
Imba Yekugezera Muunganidzwa Emanuele Pangrazi CATINO